China MOPA laser manamarika orinasa mpanamboatra sy mpamatsy | Haotian
Masinina fanamarihana laser MOPA
Mope Laser Making machine dia manana loharano laser laser Mope manokana, izay manana ny fiasa rehetra ananan'ny marika laser laser. Ary manana fiasa manokana fanampiny izay tsy ananan'ny milina fanoratana laser mahazatra hafa. Manokana hanamarihana loko mainty amin'ny akora vita amin'ny vy vita amin'ny alimina Anodized.
Ny andian-dahatsoratra FastMarker F –D （Mopa Fiber Laser Marker） dia manome fanamarihana laser haingam-pandeha haingam-pandeha, natao hanamarihana ireo akora metaly sy ireo fitaovana tsy metaly mafy toy ny faritra plastika, toy ny lahatsoratra fampiroboroboana, fanomezana ary takelaka data. Ary ny fisoloana endrika dia azo entina, azo alain-tahaka, ary misy multifunctional; mitondra anao fanandramana fanodinana laser hafa io.
• Famolavolana miharo be, tsy mampihena ny haben'ny masinina ihany, fa manome antoka ny faritra iasana.
• Famolavolana fiarovana voaaro tanteraka, ilay fitaovana miaro amin'ny varavarana sy ny varavarankely fandinihana dia misoroka tsara ny taratra laser sy ny setroka setroka mandritra ny asa.
• Ny famolavolana ankapobeny dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny CE.
• Arindrao ny rafitra fametrahana jiro mena roa, fifantohana haingana ary fametrahana mazava tsara, hanatsara ny marina sy ny hafainganana amin'ny asa.
• Fitaovana loharano fibre avo lenta sy lohan'ny scanning, hery miorina, angovo mahery ary fahombiazana avo lenta.
• Rindrambaiko multifunctional foron-tena, mifanaraka amin'ny AutoCAD, Coreldraw, Photoshop, sns.
Ity maodely ity dia azo ampiasaina hanoratanao fitaovana vy sy fitaovana tsy metaly sasany, ary hanampiana fitaovana vaovao tsy tapaka izay azo ampiasaina amin'ny fampiharana marobe. Ampiasaina be izy io amin'ny singa elektronika, ny fifandraisana, ny faritra sisa amin'ny fiara sy môtô, fitaovana ary metatra, fanafody, sakafo sy zava-pisotro, fonosana fanafody sns.
Ampiasaina indrindra hanamarihana ny mainty na fotsy amin'ny aliminioma anodized, firaka aliminioma, vy tsy misy fangarony ary vokatra elektrôlika tsy misy manimba ny tampony, manisy loko ihany koa amin'ny vy vy.
Parameter amin'ny antsipiriany:
Herin'ny Laser 30W / 50W / 60W JPT M7
Frequency amin'ny laser 20 ~ 100KHz
Rafitra Solosaina WINDOWS XP / Win7 / 8/10 32 / 64bits
Famindrana angona: Fandefasana USB2.0
Supported endrika sary: AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP
Hery manontolo 500W (AC220V 50Hz / AC110V 50Hz)
Package lanja / refy 50KG
Haben'ny fonosana 790mm × 400mm × 760mm
Tsy manohana tenifototra video ny mpanamory anao.
Controller (birao JCZ voalohany)
Loha fanaovana scanner
Famatsiana herinaratra ambony kalitao
50mm savaivony rotary manokana ho an'ny peratra (tsy voatery)
80mm savaivony rotary manokana ho an'ny peratra
Teboka mena roa (mora ny manitsy ny halavany)
Loharano laser 20W JPT MOPA miaraka amina fotoana maharitra 100000 ora.
Hafainganam-pandehan'ny laser SINO-GOLVO haingam-pandeha mahatonga ny haingam-pandeha hatramin'ny7000mm / s.
Fitaovana hentitra sy milamina, mampihena ny fiarovana.
Rafitra fanaraha-maso EZ-CAD miaraka amin'ny fahombiazany sy azo ianteherana avo. Shieldutilizing ampahany amin'ny asa sarotra, miantoka fitoniana avo.
Ny tsena lehibe
Teo aloha: HT-460 Laser Cutting Machine
Manaraka: HT-690 CO2 tamin'ny laser sokitra sy milina fanoratana